Lix maraakiibta Indian geeyay search for jet Malaysia - Rule News
Lix maraakiibta Indian geeyay search for jet Malaysia
ciidamada badda India ayaa sheegay in Jimcaha waxa uu ku dhow labanlaab tirada maraakiibta iyo diyaaradaha geeyay raadin Badda Andaman ee diyaaradaha la la'yahay la waayay Malaysia oo la 239 dadka on board.
Maamulka Naval ayaa sidoo kale sheegay Malaysia ka codsaday Hindiya in la kordhiyo hawlgallada ay search dheeraad galbeed u Bay ee Bengal, taas oo qayb ka ah Waqooyi-bari ee Badweynta Hindiya.
Ciidamada badda Hindiya ayaa sheegay in lix markab iyo shan diyaaradood ay haatan iyadana calaamad ka mid ah diyaarada ka libdhay Badda Andaman ah, oo koobay fog group Andaman iyo Nicobar India ee jasiiradaha in ilaa hadda been u koonfur ee dalka.
“Waxaan rabnaa in aan dabooli degaanka iyo waa in si adag loo sameeyo,” Afhayeen u hadlay ciidamada badda Hindiya D.K. Sharma ayaa u sheegay AFP.
India ayaa ka hor la geeyay saddex Maraakiibta iyo saddex diyaaradood in search for Malaysia Airlines Flight 370 kaas oo la waayay todobaadkii ka hor.
Doonniyaha Indian iyo diyaaradaha ayaa raadinaya in aag “loogu talagalay” by badda ee Malaysia ee gobolka koonfureed ee Badda Andaman ah, Sharma ayaa sheegay in.
The horyaalka Malaysia Airlines, oo laga badiyay xiriir on Saturday en wadada ka Kuala Lumpur in Beijing, lahaa shan rakaab saarnaa Indian.
masuuliyiinta dalka Malaysia ayaa sheegay in Jimcihii ay si weyn ballaariyo baaxadda hore u baaxad weyn oo ay search si-fog hoobiyay Camalkoodii, cinwaanka dheeraad galbeed galay Badweynta Hindiya iyo bari guud ahaan dalka Koonfur Badda Shiinaha ee.
maamulka badda Indian ku sheegay hadal uu in meesha uu yahay in la baadhay ee Bay beenta Bengal 900 kiiloomitir (560 miles) galbeed ee Port Blair, Caasimadda ah Andaman iyo Nicobar.
Afhayeen u hadlay ciidamada badda ee AFP u sheegay in India waxaa ku saleynaya codsi Malaysia ee, laakiin ma diyaaradaha ama maraakiibta weli loo leexiyey in meesha cusub.
Wuxuu sheegay in uu wax war ah kama on marka raadinta ee Bay ee Bengal bilaabi lahaa.
← Intel Abuuratay cable ah indhaha in ballan 1.6Tbps RIAA doonayo Google in la sameeyo dheeraad ah si ay ula dagaalamaan 'burcad-badeednimada’ →